Mapato matsva anosvika kuApple TV App Store | IPhone nhau
Zvikamu zvitsva zvinosvika muApple TV App Store
El App Store Del Chizvarwa chechina Apple TV, iyo yatinoyeuka inoshandisa musiyano weIOS 9 unonzi tvOS, inoramba ichivandudza nekufamba kwemazuva. Kusvikira nguva pfupi yadarika, vamwe vashandisi vakakwanisa kuona maviri akasiyana ezvikamu zveapp (mitambo uye varaidzo), nhamba iyo yawedzera zvino kusvika kumapoka manomwe. Zvine musoro, mikana yakawanda yatinayo, zvichave nyore kuwana chishandiso chatiri kutsvaga, uye zvakatowanda izvozvi zvekuti hatigone kushandisa chero keyboard kana iyo iPhone kana iPad kuisa iwo mavara.
Iwo matsva mapoka akawedzerwa ari dzidzo, Hutano nekusimba, Mararamiro, Noticias y mitambo. Vashandisi vanga vatove nezvikamu zviviri zvakapfuura zviripo havafanirwe kuita chero chinhu. Simply tora iyo «Zvikamu» menyu uye ivo vachave varipo vakamirira. Ini chaizvo handingavaone, saka ndichave ndichifanira kuve nemoyo murefu. Kuuya kwemamenyu matsva eApple TV 4 App Store kunozoitika zvishoma nezvishoma uye ndinofunga vachasvika nekukurumidza vashandisi veUS.
Hazvisi pachena kuti Apple inowedzera sei matsva mapoka. MuDownloadBlog, ndipo pandakawana mufananidzo wandakawedzera, vanotenda kuti iwo mapoka inogona kuwedzerwa zvoga apo vashandisi varikutora kana, mune mamwe mazwi, ivo vanowedzerwa muhurongwa hwekuzivikanwa. Zvinoshamisa, asi zvinogoneka. Imwe ingangodaro ndeyekuti Apple ichawedzera iwo maratidziro sezvo ichitenda kuti vashandisi kana ivo pachavo vanozove vanofarira, iyo yekupedzisira zvichienderana nemari yavanogona kuburitsa uye uko mitambo ine zvakabatanidzwa kutenga ine zvakawanda zvekutaura.
Ehezve, kunyangwe iyo Apple TV nyowani iine zvakawanda zvingangoita, izvo zvikanganiso zveApp Store yayo zvinoratidza kuti ichiri kuda kukwenenzverwa. Ini handisati ndaona zvikamu uye izvo zvinoita kuti zvindiomere kuwana maapplication matsva, asi zvakanaka kuti uone kuti vamwe vashandisi vangavaone sei uye vafunge kuti ndichakurumidza. Iwe unoona izvo zvikamu zvatova? Usazeze kusiya yako chirevo, izvo zvinotibatsira kuti tizive kana iri mhando rekuvandudza rinouya kwatiri nevashandisi kana nenyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » appletv » Zvikamu zvitsva zvinosvika muApple TV App Store
JM Grana akadaro
Ndakatenga iyo 64-gigabyte Apple TV kuMediamarkt nezuro uye mangwanani ano yanga isisashande kwandiri. Ini ndachinja icho chitsva uye kuti ndione kuti zviri sei uye panguva ino muApple Chitoro ini handina kuona chero shanduko yezvikamu. Chandave ndanyadziswa nacho ndechekuti handikwanise kubatanidza keyboard kana kushandisa iri kure iOS app. Kune rimwe divi, mune yekare Apple TV 3 hongu.
Pindura JM Grana
Paul Aparicio akadaro
Mhoroi, JM Grana. Chinhu chebhodhi chinowanzoodza moyo. Hapana anofara nazvo (Ndiani aigona?). Ndinovimba kure kunoenderana. "Ndinoiwana" iyo Apple inosarudza kutengesa mutungamiriri kana kuti isu tishandise, asi chii chinodhura icho kuwedzera kuwedzera typing rutsigiro? Kunyangwe izvi zvichizogadziriswa hafu patinogona kuisa zvinyorwa nezwi.
Nezvezvikamu, iwe unosimbisa kuti hazvishande kutenderedza pano, kuti handizi ini chete. Inofanira kunge iri yeWhatsApp mhando yekuvandudza nemafoni: pese paunoda, tinya bhatani uye tinaro.
Shazam anoziva nziyo nekukurumidza
TotalMount Pro: chishongedzo chekuvanza yako Apple TV kuseri kweTV